नेपाल टेलिकमको स्प्रिङ अफर, कुन अफर लिने यसरी आफैं छान्नुहोस् - Mobiles Khabar
नेपाल टेलिकमको स्प्रिङ अफर, कुन अफर लिने यसरी आफैं छान्नुहोस्
मोबाईलस् खबर २५ माघ २०७४, बिहीबार १९:५७
काठमाडौं, २५ माघ। नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि स्प्रिङ अफर (Spring Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफर बिहिबारदेखि लागू भएको छ र अफर आगामी २०७५ साल बैशाख २५ गते सम्म लिन सकिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ टेलिकमको नयाँ अफरहरु –
जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले पहिले देखि नै उपलब्ध गराएका विभिन्न प्याकेजमा १४ प्रतिशत थप बोनस डाटा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा नाइट डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा पनि पहिले भन्दा थप १४ प्रतिशत बोनस डाटा उपलब्ध हुनेछ ।
जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा एसएमएस प्याक प्रयोग गर्न सकिने छ । यो प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी ६० वटा एसएमएस र ६० वटा बोनस एसएमएस समेत उपलब्ध गराइएको छ । यसरी १२ रुपैयाँमा १२० वटा एसएमएस गर्न सकिने छ ।
जीएसएम तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा कम्पनीकै नेटवर्कभित्र भ्वाइस प्याक अन्तर्गत एक दिनका लागि १० रुपैयाँमा ११ मिनेट भ्वाइस कल प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा ३० मिनेटको प्याकेज ३ दिन अवधिका लागि उपलब्ध छ । ५० रुपैयाँमा ५ दिनका लागि ७५ मिनेट, १०० रुपैयाँमा १० दिनका लागि २०० मिनेट, २०० रुपैयाँमा २८ दिनका लागि ४१० मिनेट, ३०० रुपैयाँमा ३० दिनका लागि ६५० मिनेट र ५५० रुपैयाँमा ६० दिनका लागि १२०० मिनेट कल उपलब्ध गराइएको छ । सो कल नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्रका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
कम्पनीले कर्पोरेट ग्राहकहरुका लागि कन्भज्र्ड सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म जीएसएम पोष्टपेडलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा अब जीएसएम/सीडीएमएका प्रिपेड/पोष्टपेड सबैमा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट ग्रुपका विभिन्न समूहलाई उपयुक्त हुने गरी ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँको विभिन्न दरका सीयूजी प्याकेजहरु उपलब्ध गराइएको छ ।
ब्यक्तिगत तर्फ ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ४५० जिबी, ६ महिनाका लागि ११०० जिबी र १२ महिनाका लागि २४०० जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ४,२३७ रुपैयाँ ५० पैसा, ७,७९७ रुपैयाँ र १३,५६० रुपैयाँ छ ।
१४ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ७०० जीबी, ६ महिनाका लागि १६०० जीबी र १२ महिनाका लागि ३५०० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ४,७४६ रुपैयाँ, ८,८१४ रुपैयाँ र १५,५९४ रुपैयाँ छ ।
३३ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि १०५० जीबी, ६ महिनाका लागि २३०० जीबी र १२ महिनाका लागि ५००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ५,२५४ रुपैयाँ ५० पैसा, ९,८३१ रुपैयाँ र १७,६२८ रुपैयाँ छ ।
५५ एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि ६५०० जिबी डाटा रु. २०,३४०।– मा र १०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि ८५०० जीबीको डाटा २५,७६४ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी कर्पोरेट युजर प्याकेज अन्तर्गत ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज ३ महिनाका लागि १६०० जीबी, ६ महिनाका लागि ३६०० जीबी र १२ महिनाका लागि ८००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ८,४७५ रुपैयाँ, १५,९३३ रुपैयाँ र २८,४७६ रुपैयाँ छ ।
१४ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि २२०० जीबी, ६ महिनाका लागि ५००० जीबी र १२ महिनाका लागि ११००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ९,४९२ रुपैयाँ, १७,९६७ रुपैयाँ र ३२,५४४ रुपैयाँ छ ।
३३ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि २८०० जीबी, ६ महिनाका लागि ६४०० जीबी र १२ महिनाका लागि १४००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः १०,१७० रुपैयाँ, १९,३२३ रुपैयाँ र ३५,२५६ रुपैयाँ छ ।
५५ एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि १८००० जीबी डाटा ४०,६८० रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि २४००० जीबीको डाटा रु. ५१,५२८ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np मार्फत पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
Nepal Telecom NTC २५ माघ २०७४, बिहीबार १९:५७
Previous: सोनीको शोरुम शेर्पा मल दरवारमार्गमा
Next: पाँच सय भारुमा फोरजी स्मार्टफोन, अन्य सुविधा पनि पार्इने